I-Layers of Atmosphere yomhlaba
I-Atmosphere iququzelelwe njenge-Skin onion
Imvulophu yegesi ejikeleze iplanethi yethu yomhlaba, eyaziwa ngokuba yi-atmospheric, ihlelwe kwiindawo ezi-5 ezihlukeneyo. Ezi ziqalo ziqala kumgangatho womhlaba, zilinganiselwe kumgangatho wolwandle , kwaye zinyuka kulokho esikubiza ngokuba yindawo yangaphandle. Ukususela emhlabathini baphezulu:
Phakathi phakathi kwezi ziqendu ezinhlanu eziyinxalenye yenguqu ebizwa ngokuthi "ikhefu" apho utshintsho lwamaqondo obushushu, ukubunjwa kwomoya kunye nokunyaniseka komoya.
Iipasa zibandakanya, i-atmospheric iyonke i-9 layers thick!
I-Troposphere: apho i-Weather iya kwenzeka
Kuzo zonke izithuba zomhlaba, i-troposphere yilapho esiyazi kakuhle (nokuba uyayiqonda okanye awuyiyo) kuba siphila phantsi kwayo - emhlabeni. Ikhupha ubuso bomhlaba kwaye iya phezulu ukuya phezulu. I-troposphere ithetha, 'apho umoya uphenduka'. Igama elifanelekileyo kakhulu, kuba liluhlu apho kusenziwa khona imozulu yemihla ngemihla.
Okunye: Kutheni sifumana imozulu?
Ukuqala kumgangatho wolwandle, i-troposphere iya kunyuka kwii-4 ukuya kweekhilomitha ezingama-12. Umgangatho wesithathu ophantsi, osesondelene nathi, uqulethe i-50% yazo zonke iindleko ze-atmospheric. Le yodwa inxalenye yokwenza konke okwenziwa umoya ophefumulayo. Ndiyabulela emoyeni wayo ukuba uphezulu ukusuka ngaphantsi komhlaba ongenawo amandla okushisa kwelanga, ukushisa kwama-tropospheric kunciphisa njengoko uhamba ukuya kwisiseko.
Kwiphezulu lalo lincinci elincinci elibizwa ngokuba yi- tropopause , okuyiyona nje ibhokisi phakathi kwe troposphere kunye ne-stratosphere.
I-Stratosphere: Ikhaya le-Ozone
I-stratosphere ingqonge elilandelayo lomoya. Yandisa naphi na ukusuka kwii-4 ukuya kweekhilomitha ezingama-12 (6 ukuya kuma-20 km) ngaphaya komhlaba ukuya kwii-kilometer ezingama-50 (50 km). Le yongqongqelo apho ezininzi zeenqwelo zeenqwelo zeenqwelo zeenqwelo zeenqwelo zeenqwelomoya zihamba kwaye iibhaluni zemozulu zihamba.
Apha umoya awuqhubeki uphezulu kodwa uhamba uhambelana nomhlaba ngokukhawuleza okuhambayo. Iqondo lokushisa liyakhula njengoko unyuke, ngenxa yobuninzi be-ozone yemvelo (O3) -i-product ye-radiation yelanga kunye ne-oksijini ene-knack yokumisa i-ray enobungozi yelanga. (Naliphina ixesha lokushisa landa kunye nokuphakama kwimozulu, lwaziwa ngokuthi "ukuguquka.")
Ekubeni i-stratosphere inezifudumezi ezifudumeleyo ezantsi kunye nomoya opholileyo phezulu, i-convection (iindudumo) ayinqabile kule nxalenye yomoya. Enyanisweni, unokubonakala ubona indawo engezantsi kwimozulu esichukumisayo apho iindawo eziphakamileyo ezinama-cumulonimbus amafu. Kanjani? Ekubeni isalathisi senza "isimboli" sokuhambisa, iiphakamiso zamafu eziqhwithi azinakho ukuhamba kodwa zisasazeka ngaphandle.
Emva kwe-stratosphere, kuphinda kubekho uhlalutyo lwexesha, eli xesha libizwa ngokuba yi- stratopause .
I-Mesosphere: "I-Middle atmosphere"
Ukuqala malunga neekhilomitha ezingama-50 (ngaphezu kweekhilomitha ezingama-50) ngaphezu komhlaba kunye nokwandisa ukuya kuma-53 km (i-85 km) yi-mesosphere. Ummandla ophezulu we-mesosphere yindawo ebanda kakhulu yendalo ngokusemhlabeni. Ukushisa kwalo kunganciphisa ngaphantsi kwe--220 ° F (-143 ° C, -130 K)!
I-Thermosphere: "I-Atmosphere ephezulu"
Emva kokuba i- mesosphere kunye nomsopause ifika i-thermosphere.
Ukulinganisa phakathi kweekhilomitha ezili-85 kunye neekhilomitha ezingama-600 ngaphezulu kwehlabathi, iqulethe ngaphantsi kwe-0.01% yomoya wonke ngaphakathi kwimbulunga. Amaqondo okushisa apha afinyelela kuma-3 600 ° F (2,000 ° C), kodwa ngenxa yokuba umoya uncinci kwaye kukho amancinci amancinci ekwenzeni ukufudumala, ezi ziqondo eziphezulu ziza kubonakala zibandayo kakhulu kwesikhumba.
I-Exosphere: Apho i-Atmosphere ne-Space Out Meet
Kwimitha engama-6 200 (iikhilomitha ezili-10 000) ngaphezu kwehlabathi yinto engapheliyo-emkhathini ongaphandle. Yilapho i- satellites yemozulu ijikeleza umhlaba.
I-ionosphere ayilona lohlu lwayo oluhlukeneyo kodwa empeleni ligama elinikwa emoyeni ukususela malunga neekhilomitha ezingama-60 ukuya kwii-620 ezili-km (iikhilomitha ezili-1) eziphakamileyo. (Iquka iindawo eziphezulu kakhulu ze-mesosphere kunye nazo zonke i-thermosphere kunye ne-exosphere.) I-athomu zegesi ziyahamba kwindawo ephuma apha.
Kubizwa ngokuba yi-ionosphere kuba kule ngxenye yemoya ilanga lomlilo liyi-ionized, okanye lithatyathwa ngaphandle njengoko lihamba emasimini omhlaba kwiindawo ezisemntla nasezantsi. Oku kudibanisa kubonwa emhlabeni njengama- aororas .
I-Sugar Molecular Formula
Indlela yokubala Iphutha loVavanyo kwiKhemistry
Iibhogi ezibomvu neziMnyama onokuzifumana kumyezo wakho
IPasika yePasika yePasika njani-Ukukhokela
Uhlobo lweNtsapho yasePittsburgh I-Quarterback uBen Roethlisberger